FIFIDIANANA KAOMINALY: “Soloy ny mpikambana ao amin’ny CENI sy HCC” | déliremadagascar
politique	 15 juillet 2019 lynda
Tsy manaiky ny hanatanterahana ny fifidianana ben’ny tanana sy mpanolontsaina ny “hetsiky ny olom-pirenena miady amin’ny hosoka sy ny hala-bato amin’ny fifidianana” na (H.O.M.2H.F). Nanao jery todika ny fifidianana filohampirenena sy solombavambahoaka ity “hetsiky ny olom-pirenena miady amin’ny hosoka sy ny hala-bato amin’ny fifidianana” ity nandritra ny famelabelarankevitra natao teny Anosy ny 15 jolay 2019. Hita teny an-toerana ireo olom-pirenena, mpanao politika avy amin’ny antoko isan-karazany, solontenan’ny fiarahamonim-pirenena, ireo kandida tamin’ny fifidianana filohampirenena sy solombavambahoaka… Naseho an-tsary tamin’io fotoana io ny santionany amin’ireo porofo milaza fa feno hosoka sy hala-bato ireo fifidianana teo aloha. Nambaran’ny mpitarika ny hetsika, Rakotomalala Henri fa tsy azo ekena amin’ny fifidianana ben’ny tanana sy mpanolontsaina ny endri-pifidianana feno hosoka sy ny hala-bato. Nivoitra tamin’ny famelabelaran-kevitra nokarakarain’ny H.O.M.2H.F ihany koa fa raha iny endri-pifidianana iny feno hosoka sy hala-bato tamin’ny fifidianana roa nifanesy iny no mbola tohizana dia handiso fanantenana ny olom-pirenena ary vao maika hampidina ny taham-pandraisan’anjaran’ny mpifidy. Raha ireny fifidianana nifanesy ireny no jerena dia tsy matoky ny mpikarakara fifidianana intsony ny vahoaka.
Mba tsy hiverenan’ny hosoka sy ny halabato dia namoaka fehin-kevitra ny “hetsiky ny olom-pirenena miady amin’ny hosoka sy ny hala-bato”. Mangataka ny fanoloana ny mpikambana ao amin’ny vaomiera mahaleotena mikarakara ny fifidianana (CENI) sy ny fitsarana avo momba ny lalampanorenana (HCC), mangataka ny fanaovazana ny lisi-pifidianana, mangataka ny hanomezan’ny HCC fanazavana misimisy kokoa momba ireo fitoriana 684 tamin’ny fifidianana solombavambahoaka ny hetsiky ny olom-pirenena miady amin’ny hosoka sy ny hala-bato”. Rehefa tanteraka izany rehetra izany vao miroso amin’ny fifidianana ben’ny tanana sy mpanolontsaina. Nilaza Rakotomalala Henri fa fanomezan-tanana ny fanjakana izao hetsika izao satria manampy azy hanohitra ny hosoka sy ny hala-bato.
One comment on “FIFIDIANANA KAOMINALY: “Soloy ny mpikambana ao amin’ny CENI sy HCC””
Pingback: FIFIDIANANA KAOMINALY: “Soloy ny mpikambana ao amin’ny CENI sy HCC” - ewa.mg